Yebo, Lokhu Ngempela Kusimeme Kakhulu! - Isikhungo se-EcoTechnology
Nsuku zonke wenza izinqumo ezithinta isimo sezulu. Kwesinye isikhathi, into efanele ukuyenza ayicaci njalo ngaso sonke isikhathi - ukusimama kungaba okuphikisayo kunalokho ongase ucabange. Sibala uhlu lweminye imibono evamile eyiphutha nokuthi yini okufanele siyenze ngayo.
1. Yebo, sebenzisa umshini wokuwasha izitsha!
Imishini yokuwasha imishini iye yaphumelela kakhulu eminyakeni edlule, futhi ingasebenza kangcono kunokugeza izitsha ngesandla. Eqinisweni, imishini yokuwasha izitsha ingasebenzisa kuphela Amamitha angu-16,300 amanzi esikhathini esiyiminyaka eyi-10, ngenkathi ukugeza izandla kusebenzisa nxazonke Amamitha angu-34,200 wamanzi.
Lokhu kungabonakala njengokuphikisana ekuqaleni, kepha imishini yokuwasha izitsha empeleni isebenzisa amanzi kahle kakhulu kunokugeza izandla. Eqinisweni, umshini wokuwasha izitsha ojwayelekile, osayizi ogcwele usebenzisa kuphela mayelana 5 amalitha amanzi, noma ngaphansi, umjikelezo ngamunye.
Uma ungenawo umshini wokuwasha izitsha, khona-ke indlela enamandla kakhulu namanzi yokugeza izitsha zakho ukucisha ompompi bakho esikhundleni sokukuvumela ukuthi kusebenze isikhathi sokuwashwa kwezitsha. Esikhundleni salokho, zama ukugcwalisa esinye sezitsha, isibonelo, ibhodwe, ngamanzi afudumele anensipho ukugeza ezinye izitsha, bese usebenzisa amanzi abandayo ukugeza.
Isiphetho sendaba: Sebenzisa umshini wokuwasha izitsha esikhundleni sokugeza izitsha ngesandla. Linda ukusebenzisa umshini wokuwasha izitsha uze ugcwale, kodwa qiniseka ukuthi awugcwalisi ngokweqile. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi zonke izitsha zihlanzeka ngenkathi kulungiswa isikhala sokuwasha izitsha.
2. Yebo, ngempela - setha umshini wokuwasha ubande!
Ekhuluma ngokuwasha izinto, kunenye inkolelo evamile yokuthi amanzi ashisayo kuphela angenza iqhinga lokuhlanza izingubo zakho. Lokhu akunjalo.
Empeleni, Amandla angama-90% lokho kusetshenziswa lapho kuhlanzwa izingubo zethu kuya ekushiseni amanzi. Ukungasho ukuthi amanzi ashisayo angabuna futhi / noma anciphise izingubo futhi. Isizathu esikhulu sokugeza izingubo emanzini ashisayo ukuthi ukuhlanza noma yiziphi izingubo zokubulala noma yimaphi amabhaktheriya noma amagciwane.
Uma ufuna ukwenza ibanga elithe xaxa ekwehliseni amandla nokonga imali ezungeza iwashingi - zama umoya ukomisa izingubo zakho kunokuba uziphonse esomeni. Ukomisa izingubo kufaka isandla mayelana 5.8% ekukhishweni kwe-CO2 yokuhlala e-US
Lokhu kuzokhulisa nomjikelezo wempilo wezingubo zakho, okungenzeka ukuthi usufinyeziwe ngenxa yekhwalithi ye fashion fast. Ngakho-ke ngokuzayo uma kuwusuku lokuwashwa kwezimpahla, cabanga ukuwasha izingubo zakho emanzini abandayo ukonga amandla nokunciphisa umkhondo wakho wekhabhoni!
Okubalulekile: Geza izingubo zakho emanzini abandayo. Lokhu kusahlanza izingubo zakho futhi konga amandla nemali. Uma udinga ukuhlanza izingubo zakho noma ezinye izindwangu, khona-ke amanzi ashisayo yindlela okufanele uhambe ngayo.
3. Yebo, shintshela kugesi!
Izimoto ezifaka ugesi, amakhaya, ezinye izinsiza, nezinto zikagesi kungaba enye yezindlela ezingcono kakhulu zokwehlisa umkhondo wekhabhoni emhlabeni.
Kodwa-ke, njengokuluhlaza njengokuhamba kukagesi, empeleni akulona luhlaza njengoba singacabanga. Namuhla, ngaphezu kwama-25% wokukhishwa kwegesi yokushisa emhlabeni jikelele kuvela ekukhiqizeni ugesi. Njengoba ugesi wethu ukhiqizwa ngophethiloli esikhundleni semithombo evuselelekayo, kunengqondo ukuthi ukukhiqizwa kukagesi kunomthelela omncane ekufudumaleni kweplanethi. Faka sugesi trategic.
Ukufakwa kogesi ngamasu kuyinqubo yokushintsha izinto zokusebenza nezinye izinhlelo ukusebenzisa ugesi, ngenkathi kusetshenziswa amandla avuselelekayo esikhundleni samafutha ezimbiwa ukukhiqiza logesi. Lokhu kungasiza ukukhulisa ukusebenza kahle kwamandla nokunciphisa ukukhishwa.
Isiphetho sendaba: Ukufakelwa kukagesi kuyisiqalo esihle, kepha ukunciphisa ngempela i-carbon footprint yakho, ugesi kufanele unikwe amandla ngamandla avuselelekayo esikhundleni sezinto zokubasa ezimbiwa phansi.
Uma uhlala eMassachusetts, i- IMisa Londoloza Uhlelo lunikeza izaphulelo eziphanayo zokuthuthukela ezintweni ezonga ugesi nezinhlelo zokushisa nezokupholisa.
Uma ucabanga ukuthuthukela emotweni kagesi, i-Green Energy Consumers Alliance's Uhlelo lweDrayivu Oluhlaza wuhlelo lwesaphulelo semoto kagesi, okwenza izimoto zikagesi zithengeke kakhulu kunanini ngaphambili. Iziteshi zokushaja nazo zitholakala kabanzi ezindaweni eziningi nsuku zonke, kufaka phakathi isitolo sethu sokusebenzisa kabusha, Izidingo ze-EcoBuilding. Shaja imoto yakho mahhala ngokuzayo lapho unquma ukuthenga mathupha, nganoma yisiphi seziteshi zethu ezine zokushaja!
4. Yebo, ngempela - isimo sezulu sikugcina ufudumele, kodwa futhi kukugcina upholile!
Ngokusho koMnyango Wezamandla waseMelika, ama-air conditioners ayadla cishe u-6% kagesi okhiqizwayo e-United States. Ngakolunye uhlangothi, abalandeli basebenzisa ugesi omncane kakhulu kune-AC, kepha abalipholisi izinga lokushisa lomoya. Ngakho-ke, iyiphi indlela engcono yokugcina upholile ngenkathi ugcina ukusetshenziswa kwamandla phansi?
Akunandaba ukuthi i-AC yakho isebenza kahle kangakanani, ngeke ikwazi ukwenza umsebenzi uma umoya ofudumele ungena ekhaya lakho futhi umoya opholile ulahlekile. Uma ikhaya lakho lingavaliwe kahle emoyeni futhi lingafakwa ngci noma lingenamthunzi, amazinga okushisa asendlini azohlala ephezulu futhi umoya opholile uzovuza.
Enye yezinhlelo ezisebenza kahle kakhulu zokupholisa umoya (nokushisa) lapho kukhona ipompo lokushisa elincane. Iphampu yokushisa isebenza ngokudlulisa amandla esikhundleni sokwenza amandla. Futhi awasebenzisi amapayipi, okwenza ukuthuthwa kwamandla kusebenze kahle kakhulu. Izindleko zangaphambili zingaba ngaphezulu kwe-AC emaphakathi, kepha ukonga kusuka ekusetshenzisweni okuphansi kagesi, kuhlanganiswe nezaphulelo ezitholakalayo, kuzenza kube inketho engabizi kakhulu.
Ukusebenzisa izinto zokupheka njengehhavini nesitofu kungakhuphula amazinga okushisa asendlini. Gwema ukuqhuba lokhu phakathi nezinyanga ezifudumele kanye namahora afudumele osuku ngokufaka ama-microwaving, usebenzisa ibanga lokungeniswa, noma ukuba ne-cookout endala endala!
Ezindaweni ezingashisi kakhulu ezinyangeni ezifudumele, umlandeli angaba yikho konke okudingayo ukuze uhlale upholile. Vele uqiniseke ukuthi uzisebenzisa kuphela lapho usegumbini!
Isiphetho sendaba: Ukufakwa uphawu komoya okufanelekile kanye nokufakwa emgodini kubalulekile ukugcina umoya ofudumele ungaphandle nomoya opholile ungene. Uma uhlala eMassachusetts futhi ufanelekile, IMisa Londoloza noma Izinsizakalo Zokuvimbela Ukulahlekelwa Kwamandla Ekhaya Izinhlelo (ze-HELPS) zingahlinzeka ngokuhlolwa kwamandla ezindleko zasekhaya okungabizi. Ngalezi zivivinyo zamandla ekhaya, ungathola isaphulelo ngokufakwa kwendlu yakho.
I-CET ihlinzeka ngezinsizakalo zokubonisana nempompo yokushisa yamakhasimende okusiza. Shayela i- USIZA i-hotline ngo-1-888-333-7525 ukuze ufunde kabanzi. Izakhamizi ezifanelekayo zaseMassachusetts nazo zingafaka isicelo seMassachusetts Clean Energy Center Umshayeli wendiza Yomshini Wokushisa Emoyeni Uphelele Uhlelo.
Kuya ngokuthi uhlala kuphi, umlandeli anganela. Ukuze upholise kahle ikhaya elinomlandeli nje, zama ukusebenzisa ifeni yendlu yonke ebusuku ukupholisa ikhaya. Bese kuthi ekuseni, vala wonke amawindi nezithunzi ukugcina umoya opholile ungene. Sebenzisa isiphephetha moya ukuzungeza umoya opholile emini.
Ezindaweni ezifudumele, kwesinye isikhathi yi-AC kuphela ezokwenza ubuqili. Inketho engabizi kakhulu, esebenza kahle kakhulu kungaba ukuqhuba fan ngokubambisana ne-AC (kanye nesimo sezulu esifanele).
5. Yebo, ngempela - ukwahlukanisa kusebenza kakhulu kunokufaka esikhundleni samawindi akho!
Njengoba kushiwo ngenhla, isimo sezulu sibalulekile ngezikhathi zombili zokushisa nokupholisa. Ikhaya elinesimo sezulu esifanelekile linokuvuza okumbalwa komoya futhi liphethe umoya onesimo okuholela ekongweni kwezindleko namandla. Kepha abaluleke kangakanani amawindi ekugcineni umoya oshisayo / opholile ngaphakathi?
AmaWindows abhekele Ama-25-30% wokusetshenziswa kwamandla okuhlala kusuka ekulahlekelweni ukushisa nokuzuza kokushisa. Amafasitela ewindows kabili nawo angaholela ku U-18-24% wokonga ngaphezulu kwewindi lewindows eyodwa. Kodwa-ke, awudingi ukuphuma usheshe uyothenga amawindi amasha, asebenza kahle ukuze wonge amandla nemali. Esikhundleni salokho, enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokugcina amakhaza noma ukushisa kungabikho ekhaya lakho kungokwesimo sezulu.
Ukukhululeka kuhilela izinhlobonhlobo ze amasu ukwenza ngcono imvilophu yekhaya lakho ukuyenza iphumelele futhi uyivikele ezintweni ezingaphandle. Lokhu kungabandakanya ukuvala iminyango namawindi okususa isimo sezulu, ukuvala ukuvuza komoya ngogwebu lwesifutho noma ukufaka okophahla noma ukufakwa odongeni. Isimo sezulu singenza ikhaya lakho likhululeke, longe imali, futhi lithuthukise ikhwalithi yomoya yasendlini. Uma udinga amawindi amasha, sinamandla amaningi owonga ugesi amafasitela abuyiselwe kabusha esitolo sethu, i-EcoBuilding Bargains!
Okubalulekile: Isimo sezulu sezulu ekhaya lakho, kufaka phakathi i-caulking nokususa isimo sezulu, esikhundleni sokuthenga amawindi amasha. Lokhu kungaba yiphrojekthi ye-DIY noma eyenziwe ngochwepheshe ngenye yezinhlelo zokuhlala ezisebenza kahle ngamandla.
I-CET ingakusiza ngalokhu! Bhalisela manje mahhala Ukuhlolwa Kwamandla Ekhaya ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi ungenza kanjani ukuthi ikhaya lakho longe amandla.
6. Yebo, impela - cisha umlilo ebusuku!
Ukushisa ama-akhawunti asekhaya cishe U-45% wesikweletu samandla ekhaya. Ngaphambi kwama-thermostat ahlelwe kahle, iningi labantu lalinombono wokuthi isithando somlilo sizosebenza kanzima futhi sikhuphule izindleko zokushisa isikhala emuva uma ukushisa kucishiwe. Umcabango wokuthi ukugcina ukushisa kuqhubeka ekhaya kungonga ugesi empeleni akubanga nanoma yiziphi izindleko zokonga futhi akwenzi isithando sisebenze isikhathi esengeziwe. Ukucisha ukushisa ebusuku nokukuvula kuphela emini empeleni kusebenza kahle kakhulu kunokugcina ku-24/7.
Ngama-thermostat ahlelwe futhi anikwe amandla we-Wi-Fi, manje usuyakwazi ukulawula ukushisa kwekhaya lakho ngaphandle kokulahlekelwa induduzo. Ungabona ifayela le- Ukonga amandla okungu-10% ngokumane ubeke emuva i-thermostat i-7 kuya ku-10 degrees ngamahora ayi-8 bese uvuka unethezekile ngohlelo olusethwe ngaphambilini. Cabanga ukuluhlela ukuze wehlise izinga lokushisa ebusuku noma uma uphumile emini ukuze uzuze lokhu kulondolozwa.
Isiphetho sendaba: Sebenzisa i-thermostat ehlelwe noma ehlakaniphile ukuhlela ukushisa nokupholisa ukuthola induduzo enkulu nokonga.
7. Yebo, empeleni - hhayi yonke into ebonakala isetshenziswa kabusha ingeyokusebenzisa kabusha!
Sonke besikhona: kukhona into esezandleni zethu futhi senza impikiswano uma kufanele siyisebenzise kabusha noma siyiphonse kudoti. Sifuna ukwenza okulungele imvelo, ngakho-ke sikufaka emgqonyeni wokusebenzisa kabusha futhi sithembe okungcono kakhulu. Kodwa-ke, uma ngabe le nto ingeyona emgqonyeni wokusebenzisa kabusha, singaba necala le- “wishcycling”. Lokhu kuvame ukwenziwa ngezinhloso ezinhle, kepha ukufisa ibhayisikili nge -cycycyling kuholela ekungcolisweni komfudlana osetshenziswayo kabusha - futhi namazinga okungcola okusetshenziswa kabusha asevele enziwe cishe ama-25%.
Uma sifaka okuthile emgqonyeni wokusebenzisa kabusha futhi akusiwo owakhona, kungenzeka kugcine kudoti noma kunjalo. Kusukela ngesikhathi le nto ifakwa emgqonyeni wokuphinda usetshenziswe kabusha, yaya kuMasipala Wokubuyiswa Kwezinsiza (MRF), futhi imishini / abasebenzi kwakudingeka bahlunge okungaphinde kusetshenziswe ezintweni ezazisetshenziswa kabusha. Okungavuseleleki kabusha kugcina kungena kudoti esikhundleni, lapho bekufanele ngabe kufakwa khona kuqala. I-Wishcycling ithatha isikhathi nezinsizakusebenza zento ukuthi ilahlwe kahle futhi kwesinye isikhathi ize iphumele esikhwameni sonke sezinto eziphinda zisebenze ezidinga ukungena kudoti.
Ukuhamba ngebhayisikili nakho kungaholela ekukhiqizweni okuhamba kancane, kubangele ukulimala kwabasebenzi, kanye nemishini yokuphinda isebenze ujamu. Izikhwama zepulasitiki zingenye yezaphulamthetho ezimbi kakhulu, zivame ukubambeka emshinini, zinciphise inqubo kanye nemishini engalimaza, kuyilapho abasebenzi kufanele bayeke ukuhlunga izinto ezingaphinde zisebenze futhi bavule izikhwama.
Isiphetho sendaba: Ngokuzayo lapho usuzophinda usebenzise into ongaqiniseki ngayo, yima kancane bese ucabanga ukuthi ingabe ingavuselelwa kabusha ngempela, futhi uma ungabaza - ilahle ngaphandle. Umthetho omuhle wesithupha uma uyiphepha elihlanzekile, amakhadibhodi, noma amapulasitiki angamajeke, izigaxa namabhodlela, lapho-ke singaphinde sisetshenziswe.
Qinisekisa ukuthi ukusebenzisa kwakho kabusha kuhlanzekile, njengoba izinsalela ezisele zingangcolisa ukusetshenziswa kwazo futhi. Uma uhlala eMassachusetts, ungasesha noma iyiphi into ku- Phinda usebenzise i-Smart MA ikhasi lewebhu ukubona ukuthi ngabe lisendaweni yokuphinda isebenze noma emgqonyeni kadoti.
Noma izikhwama zepulasitiki zingakwazi ukuphinda zisetshenziswe kabusha ngokusebenzisa kabusha i-curbside, usengazisebenzisa kabusha kwabanye abathengisi. Thola amasayithi okushiya ukuthola kabusha ifilimu epulasitiki, noma ngena nomthengisi wendawo.
8. Yebo, empeleni - kwezinye izimo, ukuhamba ngendiza kungaba ngcono kunokuthatha isitimela!
Akuyona imfihlo ukuthi ukuhamba ngendiza kuneqhaza elithile ekuthintekeni kwekhabhoni. Kodwa-ke, iyiphi indlela yokuhamba efanele imvelo ezokwehluka kuye ngebanga, uhlobo lwezihlalo, kanye nenani labantu abahambayo.
Ngokusho kwe-Union of Concerned Scientists, izihambi ezimbili ezindiza ngaphezu kwamamayela ayi-1000 kwezomnothoivula ifayela le-PDF kungcono kunokuthatha isitimela e-US Kodwa-ke, uma uhamba ngaphansi kwamamayela ayi-1000 noma uhamba ngendiza yokuqala, isitimela sizohlala sinqoba. Ngakho ngokuzayo lapho ufuna ukundiza unqamule i-US qiniseka ukuthi uhamba ngomnotho! Futhi, zama ukuthola indiza engami kwazise iningi likaphethiloli wendiza lisetshenziswa phakathi nokusuka nokwehla.
Uhambo lwesitimela olunqamula izwe lungaba lubi kakhulu emvelweni kunokundiza njengoba izitimela eziningi e-US zisasebenza ngodizili. Izitimela eNortheast Corridor yizona kuphela izitimela e-US ezisebenzisa ugesi. Lokhu kukhipha kuphela cishe amakhilogremu angu-0.37 we-CO2ivula ifayela le-PDF ngemitha elilodwa lomgibeli, ngenkathi izitimela ezisebenzisa udizili zikhipha 0.45 amakhilogremu we-CO2ivula ifayela le-PDF ngemitha elilodwa lomgibeli.
Okubalulekile: Izitimela zingaba nomkhondo omkhulu wekhabhoni kunokundiza e-US, ikakhulukazi uma uthatha uhambo lokuwela izwe. Indlela ehamba phambili yokuhamba kungenzeka, ngebhasi labaqeqeshi bezimoto. Wonke umuntu ohamba ngale ndlela anganciphisa i-carbon footprint yakhe ngokuthi cishe ama-85%. ivula ifayela le-PDF Lezi zivame ukuba yizinketho ezingabizi kakhulu uma kuqhathaniswa nokuthatha isitimela, noma zingakhuphula isikhathi sokuhamba.
9. Yebo, ngempela - ukulungisa esikhundleni sokuthenga okusha kuyasimama!
Esikhundleni sokuthenga izinto ezintsha lapho izinto zakho ezindala zidinga ukushintshwa, cabanga ukulungisa lokho osunakho vele. Ngokombono wezezimali nowezemvelo, ukulungisa izinto kuyindlela okufanele kuhanjwe ngayo. Izinto eziningi azizange zithuthukiswe eminyakeni edlule ukuze zisebenzise amandla amaningi (njengebhokisi lakho lokubhowula noma ibhodwe lekhofi), ngakho ukuzishintsha ngeke kube nomthelela ku-carbon footprint yakho
Kodwa-ke, eminye imishini efana nokuwasha izitsha noma imishini yokuwasha isibe namandla kakhulu eminyakeni. Ukwenza ngcono le mishini kungakusiza wonge imali namandla, kepha uma endala yakho isasebenza, kungcono ukuyisebenzisa ngokugcwele ngaphambi kokuyithuthukisa.
Esinye isibonelo ukwenza switch kusuka emotweni ephehlwa ugesi iye emotweni entsha kagesi. Uma imoto yakho ephehlwa ugesi isesimeni esihle, kungcono ukuqhubeka nokushayela le moto uze ulungele ukuthuthuka. Uma usukulungele ukuthuthukisa, cabanga ngemoto kagesi! Kepha okwamanje, kungcono ukusebenzisa lokho onakho futhi ukukulungise njengoba kudingeka.
Isiphetho sendaba: Lungisa lokho osunakho kakade. Uma sekuyisikhathi sokuthuthuka, cabanga ukwenza ushintshele kokunye okuonga amandla, kepha sebenzisa lokho onakho kuze kube yileso sikhathi.
10. Yebo, impela - uma izikhwama zepulasitiki ezisetshenziswa kanye zingaphinda zisetshenziswe ngokungenamkhawulo zingasimama ngaphezu kwama-totes kakotini!
Izikhwama zepulasitiki ezisetshenziswa kanye zithathwa njengesephulamthetho esikhulu. Kepha zimbi kangakanani imvelo uma ziqhathaniswa nezinye izikhwama zokuthenga?
Izikhwama ezingasetshenziswa kabusha zingaba inketho enembile kunazo zonke kulezi zindlela ezintathu. Kodwa-ke, uma kubhekwa ukuhlolwa komjikelezo wempilo ngamunye kanye nekhabhoni yezinto okwenziwe kuzo, kungakhula kube nzima kakhulu. Ukuhlolwa komjikelezo wempilo kubheka umthelela wezemvelo esigabeni ngasinye somjikelezo wempilo wento. Lokhu kuvamise ukukhishwa, ukukhiqizwa, ukufakwa, ukuthuthwa, ukusetshenziswa, kanye nezigaba zokuphela kwempilo.
Nakhu lapho kuba nzima. Izikhwama zepulasitiki empeleni zine- okuphansi kwekhabhoni ekuqaleni komjikelezo wabo wempilo kuqhathaniswa nephepha noma izikhwama zokuthenga ezingasetshenziswa kabusha. Lokhu akusho ukuthi yizona ezisimeme kakhulu, ngoba lapho kubhekwa wonke umjikelezo wempilo, abaphumeleli. Kungenzeka uma bejwayele kaningi, kepha basetshenziswa kanye kuphela. Azonakaliseki futhi zingakwazi ukunamathela iminyaka eminingi, kubangele ezinye izingqinamba ezihlobene ne-microplastics nokungcola.
Ngakolunye uhlangothi, izikhwama zamaphepha zivame ukuba ne-carbon footprint encane kancane ekuqaleni komjikelezo wabo wempilo. Futhi izikhwama zikotini zimbi kakhulu. Isikhwama sephepha kuzodingeka sisetshenziswe okungenani amahlandla ama-3ivula ifayela le-PDF , futhi kuzodingeka kusetshenziswe ithoti kakotini okungenani amahlandla ama-131ivula ifayela le-PDF ukulingana ne-CO2 ukukhishwa kwesikhwama esisodwa sepulasitiki. Kodwa-ke, izikhwama zamaphepha zehla kalula uma ziqhathaniswa nepulasitiki, kanti ama-totes kakotini aqinile ngokwanele ukuze aphinde asetshenziswe kaningi. Lezi zinketho zibukeka zingcono kakhulu esigabeni sokuphela kwempilo ngoba zikhiqiza imfucuza encane. Kuya ngokuthi into ingasetshenziswa kaningi kangakanani nokuthi umuntu uyisebenzisa kangakanani ngempela leyo nto.
Isiphetho sendabaIsikhwama esilungele imvelo kakhulu singaba yinhlanganisela yalokhu: ukusebenzisa isikhwama sokuthenga sepulasitiki esisebenziseka kaningi ngangokunokwenzeka. Lezi zikhwama zepulasitiki ezisindayo zihlala isikhathi eside ngakho ngeke ziklebheke futhi zingasetshenziswa kaninginingi. Okungcono kakhulu, sebenzisa isikhwama osunayo ekhaya noma uthenge into eyodwa oyisebenzisayo! Ukusebenzisa izikhwama kaningi ngangokunokwenzeka ukunciphisa umthelela kwezemvelo!
Sekukonke, kungaba yinkohliso ukuzula ukuthi yiziphi izenzo ezisimeme kakhulu. Gcina engqondweni ama-Rs amane: ukunciphisa, ukusebenzisa kabusha, ukulungisa nokuvuselela kabusha! Ungasebenzisa futhi usebenzise kabusha lokho osunakho, futhi ulungise izinto njengoba kudingeka. Sebenzisa amanzi ashisayo amancane uma kungenzeka, futhi uma ungaqiniseki ukuthi into ethile ingemgqomo wakho wokuphinda usebenzise kabusha, hlola ngenkonzo yakho yokulahla / yokuphinda usebenzise ngaphambi kokuyiphonsa kudoti. Ungakhohlwa ukufaka isimo sezulu sezulu ekhaya lakho ukunciphisa izindleko zamandla futhi wandise induduzo!
Ngo-Ephreli 29th, i-2021 | 0 Amazwana